सशस्त्र प्रहरी नै ख्रिष्टियन धर्म प्रचारमा सक्रिय, अन्धविश्वास र भ्रमको खेती मौलाउँदो ! (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
सशस्त्र प्रहरी नै ख्रिष्टियन धर्म प्रचारमा सक्रिय, अन्धविश्वास र भ्रमको खेती मौलाउँदो ! (भिडियोसहित)
प्रहरी नै धर्म प्रचारमा
उनसँगै कार्यक्रममा सहभागी धेरैले यशुख्रिष्टकै कृपाले आफूमा भएको रोग निमन भएको, जीवनमा खुसीको बहार छाएको अनुभव सुनाइरहेका थिए ।
त्यसै गीतसंगीतमा पनि परमेश्वरको बयान भइरहेको थियो ।
धर्म परिवर्तन गरेर ख्रिष्टियन हुनेहरुमा अधिकांश दलित तथा जनजातिहरु छन् । निम्न आर्थिक अवस्था भएका र पिछडिएको समुदायमा गएर गुरुङको समूहले धर्म प्रचार गर्ने गरेको छ । र, सोझा गाउँलेलाई उनीहरुले सजिलै प्रभावमा पार्छन् । यशुका अनुयायी भएकाहरुलाई यस्तो भ्रम छ कि, ख्रिष्टियन भएपछि क्यान्सरदेखि मुटुरोगसम्म उपचारबिनै विसेक हुन्छ । र उनीहरु भ्रमप्रति पूर्णतः विश्वस्थ छन् ।
कुनै धर्मप्रति आस्था राख्नु र आस्था गरिएकाको भक्तिगान गाउनु स्वभाविक होला । तर, भ्रम फैलाउँदै विपन्नता र सोझोपनको फाइदा उठाउँदै धर्म परिवर्तन गराउनु गलत हो र संविधानविपरीत हो । अझ प्रहरी सेवामा जागिर खाएकाहरु नै धर्म प्रचारमा सक्रिय हुनु विडम्बनापूर्ण सत्य हो । धर्म प्रचारमा सक्रिय गुरुङलाई वुधबार नेपाल प्रहरीले नियन्त्रण लिएको छ । र, आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
संविधानतः कसैलाई लालाईफकाई वा जबरजस्त प्रभावमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन । मुलुक धर्म निरपेक्ष भएसँगै सबैलाई आफूलाई मन परेको धर्म मान्ने छुट छ । तर, कुनै भ्रामक प्रचार गर्दै धर्म परिवर्तन गर्नु हुँदैन । गरे दण्डनीय हुन्छ । तर, सशस्त्र प्रहरीका एक हवल्दारः दिलिपकुमार गुरुङले झुठो कुरा गर्दै ख्रिष्टियन धर्म प्रचार गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
सरकारी जागिर खाएर संविधानविपरीत धर्म प्रचारमा संलग्न गुरुङले अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रहरी नै धर्म परिवर्तनमा लाग्नु गलत हो । नाम समेत ढाँटेर ख्रिष्टियन धर्म माने क्यान्सर जस्ता रोग पनि विसेक हुने प्रचार गर्दै हिँडेका गुरुङलाई प्रहरीले मंगलबार राति नियन्त्रणमा लियो र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मा लगायो ।
ख्रिष्टियन धर्मका अनुयायीहरुले समाजमा बढ्दो विकृतिको कारण ‘हिन्दू धर्म भएको’ दाबी गर्छन् । संविधानतः एउटा धर्मवालम्बीले अर्को धर्म माथि धावा बोल्न पाइँदैन । तर, ख्रिष्टियनहरु खुलेयाम हिन्दू धर्मको विरोध गरिरहेका छन् । जसमा प्रहरीको समेत संलग्नता छ । प्रहरी कानुन अनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले कारबाही गर्न निमिल्ने भएकाले धर्म प्रचार र परिवर्तनमा सक्रिय गुरुङलाई सशस्त्र प्रहरीकै जिम्मा लगाइएको नेपाल प्रहरीले बताएको छ ।
अब हवल्दार दिलिपकुमारलाई कस्तो प्रकारको कारबाही गर्ने भन्ने जिम्मा सशस्त्र प्रहरीमा पुगेको छ । गुरुङविरुद्ध आधिकारिक उजुरी परेको छैन । जसकारण पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठेरो परेको बताइएको छ । प्रहरी सेवामा संलग्न नै संविधानविपरीत धर्म प्रचार र परिवर्तनमा सक्रिय हुन्छ भने उसलाई कानूनअनुसार कारबाही हुनैपर्ने दबाव बढेको छ ।